सांसदज्यू, कानुनको त्रासले कामेका हातले कसरी शल्यक्रिया गरूँ ? – Health Post Nepal
२०७७ माघ ५ गते | Monday, 18 Jan, 2021
२०७५ भदौ १२ गते ६:०२
अहिले ‘मुलुकी अपराधसंहिता ऐन २०७४’ ले चिकित्सा क्षेत्रमा ल्याएको नयाँ व्यवस्थाका कारण स्वास्थ्य सेवाप्रवाहबारे नै गम्भीर बहस भइरहेको छ । यतिवेला मुलुकका आमचिकित्सक आतंकित र तरंगित भइरहेका छन् । आमचिकित्सकका मनमा एउटा प्रश्न घुमिरहेको छ– अव्यावहारिक कानुनको पेस्तोल कन्चटमा तेस्र्याइएको अवस्थामा कसरी सेवा दिन सकिन्छ ?
एकातिर यो त्रास छ, अर्कोतिर यति संवेदनशील विषयमा यति गम्भीर बहस भइरहँदा राज्यका अन्य संयन्त्र र जिम्मेवार मानिसहरू किन मौन छन् ? जनताका मतबाट निर्वाचित सांसदहरू, अग्रज र विद्वत्वर्गको विषयप्रति संवेदनशीलता नभएको हो कि बुझाइ नपुगेको ? कानुनको त्रासमा कामेका हातले एउटा चिकित्सकले कसरी शल्यक्रिया गर्न सक्ला भनेर किन चोच्नुभएको छैन ? किन बोल्नु भएको छैन ?
श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ, ओठ, मुख सबै निलो भएर अर्धचेत अवस्थामा अस्पताल आएकी आमालाई इमर्जेन्सीमा चिकित्सकले तुरुन्तै उपचार सुरु गर्नुको सट्टा आफू जोगिन ‘कानुनी क्लियरेन्स’ लिनुपर्ने अवस्थामा सहज स्वास्थ्य सेवा सम्भव हुनैसक्दैन ।
स्वास्थ्य सेवालाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेकाले व्यवहारतः सोको प्रत्याभूति गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । राज्यले चिकित्सक र चिकित्सा क्षेत्रलाई तहस–नहस पारेर त्यो हक कसरी नागरिकलाई दिलाउन सक्छ भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो रूपमा उठेको छ । नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर कसलाई फाइदा पुग्छ? कतै यो तप्का सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवालाई कमजोर बनाउन त पक्षपोषित भइरहेको छैन ?
यसबाट सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा झन् कठिन र महँगो हुने अवस्था आइपर्नेतर्फ संवेदनशीलता कहीँ–कतै देखिएको छैन ।
एउटा चिकित्सकले, अझ सर्जनका रूपमा कार्य गरिरहँदा, जोखिमपूर्ण सर्जरी, अझ भनौँ सबै सर्जरी सानो होस् वा ठूलो जोखिम हुन्छ नै, यस्तो अवस्थामा सामान्य जोखिम पनि कसरी, कसका लागि र किन लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित भएर मेरो मस्तिष्कमा घुमिरहन्छ । कुनै व्यक्तिको उपचारमा चिकित्सक नेतृत्वकर्ता हुन सक्छ, तर एक्लो निर्णायक होइन । उपचारमा प्रगोग हुने औषधि, बेहोस बनाउने औषधि र मेसिन, अप्रेसन गर्ने कोठा र औजार–उपकरणको सही निर्मलीकरण, बिरामीको अन्य शारीरिक अवस्था वा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताजस्ता कुराले उपचारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छन् । सेवामा खटिने अन्य जनशक्तिको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्षदेखि यी सबै विषयको जिम्मा चिकित्सकले किन र कसरी लिने ?
मुलुकी ऐनमा रोगको उपचार गर्दा हुने नकारात्मक असर, जटिलता र रोगका कारण हुने दीर्घकालीन असरलाई छुट्टै सम्बोधन नगरी बदनियत र हेलचक्य्राइँमा राखिएको छ । चिकित्सा विज्ञानमा प्रयोग हुने औषधि र सर्जरी सबैका आफ्नै नकारात्मक असर (साइडइफेक्ट) र जटिलता (कम्प्लिकेसन्स) हुन्छन्, जुन सबै उपचारका क्रममा आउन सक्छन् । यस्ता आइपर्न सक्ने वा बारम्बार हुने (मोस्ट कमन) नकारात्मक असर वा सामान्य असरले बिरामीको मृत्यु, अंगभंग भएमा, हेलचक्य्राइँ वा बदनियतमा परिणत भई सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा चिकित्सकबाट मात्र ग्यारेन्टी खोजिन्छ भने कसरी सेवा दिऊँ ?
यो कानुन संशोधन नगर्ने हो भने सामान्य ज्वरो आएको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण जाँच गरेर मात्रै उपचार थाल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । सम्पूर्ण जाँच विना उपचार थालेर बिरामीको स्वास्थ्य बिग्रेमा चिकित्सकलाई हेलचेक्य्राइँका नाममा अपराधीसरह सजाय हुने अवस्था कानुनले सिर्जना गरेको छ ।
एउटा चिकित्सकले आफू र आफ्नो परिवारलाई असुरक्षित राखेर सेवा दिइरहँदा चिकित्सकीय सेवा दिएबापत अपराधी हुनुपर्ने ? एउटा चिकित्सक जो ‘हिप्पोक्रेटिक वाथ’ खाएर बिरामीलाई बचाउन अग्रसर छ, उसैलाई अपराधी साबित गर्ने यो मुलुकी ऐनबारे राज्य किन मौन छ ? आम–नागरिक, नागरिक अगुवालगायत बुद्धिजीवीले यो विषयमा बोल्नुपर्दैन ?
यो कानुनको त्रासले उपचार प्रभावित भएमा सबैभन्दा बढी असर दुर्गममा रहेका, साथै मध्यम र न्यून आय भएका र राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका आमनागरिकमा पर्ने निश्चित छ, जहाँ सामान्य उपचार गर्न पनि राजधानी वा विदेश धाउनुपर्ने हुन्छ ।
यो कानुन संशोधन नगर्ने हो भने सामान्य ज्वरो आएको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण जाँच गरेर मात्रै उपचार थाल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । सम्पूर्ण जाँच विना उपचार थालेर बिरामीको स्वास्थ्य बिग्रेमा चिकित्सकलाई हेलचेक्य्राइँका नाममा अपराधीसरह सजाय हुने अवस्था कानुनले सिर्जना गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सबैखालका जाँच गराउँदा चिकित्सा सेवा स्वाभाविक रूपमा निकै महँगो हुनेछ । २१औँ शताब्दीमा पनि झाडापखालाले मृत्यु हुने हाम्रो देशमा कसरी स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको पहुँचमा पुग्न सक्ला ?
आङ खस्ने रोगले ग्रस्त हाम्रा आमा, दिदीबहिनीको उपचार कसरी हुन सक्छ ? कसरी स्वास्थ्य सेवा सुलभ हुन्छ ? उपचारका क्रममा हुने कम्लिकेसन्स (जटिलता)लाई अंगभंगको आरोपमा जेल सजाय हुने त्रास मनोविज्ञानमा एउटा चिकित्सकले सेवा दिन सक्दैन ।
श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ, ओठ, मुख सबै निलो भएर अर्धचेत अवस्थामा अस्पताल आएकी आमालाई इमर्जेन्सीमा चिकित्सकले तुरुन्तै उपचार सुरु गर्नुको सट्टा आफू जोगिन ‘कानुनी क्लियरेन्स’ लिनुपर्ने अवस्थामा सहज स्वास्थ्य सेवा सम्भव हुनैसक्दैन । अहिले चिकित्सकको ध्यान कसरी बिरामीको ज्यान बचाउने भन्नेमा लाग्नुभन्दा पनि कसरी आफू सुरक्षित रहने भन्ने सोच्न बाध्य हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
हामी चिकित्सक कानुनभन्दा माथि हुनुपर्छ भनिरहेको पटक्कै होइन । चिकित्सकमाथि शंका लागेमा वा गल्ती हुन सक्ने अवस्थामा सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ टोली बनाई छानबिन गरी दोषी पाइएमा कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्छ । दोषी प्रमाणित भइसकेपछि क्षतिपूर्ति तथा हर्जना तिराउने कुरामा पनि हाम्रो आपत्ति रहन्न । तर, सुरुमै फौजदारी मुद्दा लगाई जेल चलान गर्नु कदापि न्यायोचित छैन । र, यो चिकित्सा पेसाको अपमानसँगै यसको संवेदनशीलता र मर्ममाथिको प्रहार हो ।
आजभन्दा ५०÷५५ वर्षअघि आएको मुलुकी ऐनमा, चिकित्सकलाई सजाय दिनुभन्दाअगाडि त्यसलाई छानबिन वा जाँचपड्ताल गरी विज्ञटोलीको राय लिएर मात्रै सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आधुनिक र सभ्य भनिएको अहिलेको समाजमा विषयवस्तु नबुझी यो तहको कानुन बन्नु आफैँमा लाज्जास्पद विषय हो । अहिले त्यस्तो प्रावधान नै नराखी ठाडै ज्यानमारासरह कारबाही गर्ने सोचयुक्त कानुन बन्नु चिकित्सकप्रति पूर्वाग्रहको उपज हो ।
छिमेकी देश भारतमा समेत अदालतले विभिन्न समयमा फैसला गर्दा ‘चिकित्सकले लापरबाही गर्यो भनेर कारबाही गर्नु भनेको स्वास्थ्य सेवा नदिनुसरह हो’ भनी चिकित्सा पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाएको छ ।
नेपालको नयाँ कानुनले भर्खर बामेसर्न लागेका अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विभिन्न विधाका सर्जनका हात बाँध्छ । त्यसले नेपालमा सहज भएका सेवाको सट्टा विदेशको महँगो सर्जरी सेवा लिन बाध्य पार्न खोजिएको त होइन ? भन्ने शंका उब्जाउँछ । यो कानुन कदापि नेपाली जनता र चिकित्सकको हितमा छैन । यसले उपचारका नाममा करोडौँ नेपाली रुपैयाँ बिदेसिनेछ । अतः चिकित्सकलाई मानसिक दबाबमा राखेर कामेका हातहरूलाई औषधि सिफारिस र शल्यक्रिया गर्न लगाएर सही उपचार र गुणस्तरीय सेवा दिन सम्भव छैन । यस्ता कदमले नेपाललाई मेडिकल हब बनाउने सपनामाथि मजाक उडाइरहेका छन् ।
लेखक: वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन तथा चिकित्सक संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
Tags: डा.बद्री रिजाल, नेपाल चिकित्सक संघ, मुलुकी ऐन
3 thoughts on “सांसदज्यू, कानुनको त्रासले कामेका हातले कसरी शल्यक्रिया गरूँ ?”
चूड़ामणि पाठक says:
डा बद्री रिजालका कुरा सान्दर्भिक र मार्मिक छन । सम्बंधित निकायले बेलैमा सचेत हुनु ज़रूरी छ ।
नेताहरु विदेश जाने । अलिअलि घरखेत हुनेहरु भारत जाने । बाँकीले चाहिं अाफ्नै देशको हावापानी खाने यतै मर्ने ।
सुबाश श्रेष्ठ says:
मार्छु भनेर मर्नेलाई कानुन ले डराउन र समाउन र सजाय दिलौन चाहि न सक्ने तर आफ्नो सीप, अनुभव ,ज्ञान र कर्मठ भावले सक्दो कोसिस गरेर बचाउन ब्याक्ती लाई कानुन तेर्सस्याउने।
LeaveaReply to सुबाश श्रेष्ठ Cancel reply
कन्डमको डेट एक्सपायर भएको कसरी थाहा पाउने ?
नेपालमा २६६ संक्रमित थपिए, थप ४ सयले कोरोना जिते